The Font Store: endritsoratra 20 mety tsara ho an'ny tetikasanao | Famoronana an-tserasera
The Font Store: endritsoratra 20 mety tsara ho an'ny tetikasanao
Jose Angel | | loharanom-baovao, dia midika hoe
Ny endritsika tsirairay avy amintsika, izay ao anaty solosaintsika, dia vitsy foana. Misy tetikasa maro samihafa izay mitaky lohahevitra samihafa. Anisan'izany, ny manaitra indrindra dia ny endritsoratra. Habe, endrika ary loko. Fa ireo izay manasarotra ny hevitsika momba ilay tetikasa dia ireto.
Ity lisitry ny endritsoratra manaraka atolotray ao amin'ny Creativos Online ity dia iray amin'ireo safidy tsara indrindra hitanay. Maimaimpoana daholo izy ireo, farafaharatsiny, rehefa manoratra ity lahatsoratra ity. Toy ny mety hitranga foana, rehefa afaka kelikely, ny sasany amin'izy ireo dia nesorina. Na afaka mandeha amin'ny fomba fampidinana amin'ny alàlan'ny fandoavam-bola izy ireo. Raha miaro foana aho, ny fandoavana ny asa vita tsara dia tsy tokony ho olana rehefa te hiverina aminy ianao.
1.4 Lahatsoratra mena
2.3 Aloka mankany amin'ny mazava
3 Endritsoratra borosy
3.2 Typografia Sophie
3.3 Sahisahy ratsy
4 Endritsoratra tatoazy
5 Endritsoratra tsy mahazatra
5.2 Endritsoratra Elixia
5.3 Supermarket voalohany
Lora dia endritsoratra maimaimpoana izay miorim-paka ao amin'ny calligraphy. Natao ho an'ny typeface Cyreal tamin'ny taona 2011 izy io, miaraka amin'ny extension extension Cyrillic tamin'ny 2013, ary tonga amin'ny endriny efatra: Regular, Bold, Italic, ary Bold Italic.
Aingam-panahy avy amin'i Dala Floda sy ny fianakavian'i Bodoni, Butler dia endritsoratra maimaimpoana noforonin'i Fabian De Smet. Ny tanjony dia ny hitondra maoderina maoderina amin'ny endrits serif amin'ny alàlan'ny fiasana amin'ny endrik'ireo endritsoratra serif mahazatra.
Ny Arvo dia fianakaviana fonosana geometrika slab-serif izay mety amin'ny fampiasana efijery na pirinty. Natao ho mora vakina, noforonin'i Anton Koovit ary navoaka tao amin'ny lahatahiry fonosan'ny Google ho loharano malalaka (OFL)
Ity misy fianakaviana fontsary maimaimpoana noforonina manokana ho famokarana boky, aingam-panahy avy amin'ny endrik'i Garamond taloha. Ny Crimson Text dia asan'ny mpamorona teratany alemanina Sebastian Kosch, teraka tany Toronto, izay nilaza fa voataona tamin'ny asan'i Jan Tschichold, Robert Slimbach, ary Jonathan Hoefler izy.
Ity endritsoratra sora-tanana sahisahy ity dia aingam-panahy avy amin'ireo endrika litera misavoana hita amin'ny script Tamal mahazatra. Kavivanar dia noforonin'i Tharique Azeez, mpamorona endrika karazana monina any Sri Lanika, ary afaka misintona maimaimpoana.
Amatic dia endri-tranonkala kely fonosana tanana, mety amin'ny lohateny na lahatsoratra fohy. Nahazo laza izy noho ny hatsarany hatsarany, izay feno toetra amam-panahy. Ny endritsoratra maimaimpoana dia nataon'i Vernon Adams voalohany, talohan'ny nohavaozina sy nojeren'i Ben Nathan sy Thomas Jockin. Amin'izao fotoana izao dia manana tranokala mihoatra ny 2,400,000 izy io.
Aloka mankany amin'ny mazava
Sanganasan'ny mpamorona endrika Kimberly Geswein. Mety amin'ny fampidirana fikitika manokana an'ireo tetikasanao, ity endri-tsoratra maimaimpoana ity dia misy sisiny boribory sy endri-tsoratra madio sy madio. Amin'ny fomba iray ihany no ahazoana azy io ankehitriny, saingy efa nanaporofo tena malaza be izy io.
Cute Punk dia manolotra sary miaina, tanora ary maoderina tanteraka amin'ny endritsoratra sora-tanana. Ny fametrahana ny fomba amam-panao amin'ny fahatsapana mahavariana sy saika geometrika, ity endri-tsoratra maimaimpoana ity dia asan'i Flou, mpamorona ary mpanao sary avy any Bratislava, Slovakia.
Playlist dia endritsoratra tarihin-tànana miaraka amina karazana borosy maina izay misy karazany telo: Script, Caps, and Ornament. Mety amin'ny famolavolana sary, ao anatin'izany ny afisy, tee-shirt, ary vokatra hafa.
Sophie dia maivana, sariaka ary somary tsy misy dikany, amin'ny fomba mahafinaritra. Voalaza ho "script borosy tanana an-tanana miaraka amina bonus mahafatifaty", ny fianakaviana dia misy glyph maro fiteny, ary koa ny fitambaran-tsoratra taratasy havia sy havanana.
Reckless dia endritsoratra borosy tanana izay misy sora-baventy sy litera latina miitatra. Araka ny aseho etsy ambony, dia hiasa tsara amin'ny famolavolana effets watercolor, na amin'ny pirinty na amin'ny tranonkala.
Kust dia endritsoratra tanan-tanana, sora-baventy, misy bika sy endrika maloto.
Betty dia iray amin'ireo endritsoratra tattoo tsy andoavam-bola izay niverina tamin'ny vanim-potoana taloha, rehefa nanana ny vatofantsika tantsambo ny 'tena lehilahy' ary ny 'I heart Mum' dia nanao pirinty
Ity endritsoratra tatoazy ity dia manintona ny fanahin'ny kaligrafi mba hamoronana zavatra mahafinaritra sy kanto indrindra. Ity font maimaim-poana ity dia asan'ny mpamorona Suède Måns Grebäck.
Endritsoratra calligraphic iray hafa izay mety tsara amin'ny fanaingoana ny tatoazy, i serval dia biby mikorontana sy marokoroko endrika. Ity endri-tsoratra maimaim-poana ity dia sanganasan'i Maelle.K sy Thomas Boucherie.
I Neny dia endritsoratra aingam-panahy avy amin'ny tombokavatsa taloha an'ny fomban-drazana amerikanina, ary fanomezam-boninahitra an'ireo mpanaingo tatoazy taloha. Ity endritsoratra maimaimpoana ity dia sanganasan-dRafa Miguel, talen'ny zavakanto monina ao Santo Domingo, Repoblika Dominikanina.
Endritsoratra tsy mahazatra
Ny typeface frantsay sy mpamorona sary Emmeran Richard dia namorona endritsoratra futuristic Anurati eo am-pamolavolana ny tranokalany. Richard dia namorona ny endritsoratra miaraka amin'ny fikasana hanome azy io maimaim-poana ho an'ny fampiasana manokana sy ara-barotra ho an'ny besinimaro, ary mba hahafahan'ny hafa manamboatra azy io mifanaraka amin'ny filan'izy ireo manokana.
Miorina amin'ny takelaka misy ny hexagonal, i Elixia dia karazan-tsoratra somary voafintina miaraka amina fanamafisana mahery vaika. Mpanakanto sy mpamorona endrika Kimmy Lee no namorona azy tamin'ny taona 2005, ary misy ny sora-baventy, ny sora-baventy, ny isa, ny litera miampy, ny lantom-peo ary ny fomba hafa.
Gilbert Baker, izay maty tamin'ny 2017, dia mpikatroka sy mpanakanto LGBTQ izay fanta-daza indrindra amin'ny famoronana sainam-boninkazo, ary nankalazaina noho ity endri-tsarimihetsika maimaim-poana ity. Natao miaraka amina lohateny sorabaventy sy teny filamatra ao an-tsaina, Gilbert dia azo ampiasaina ho endri-tsoratra vector mahazatra, ary koa endritsoratra miloko amin'ny endrika OpenType-SVG ary kinova mihetsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » The Font Store: endritsoratra 20 mety tsara ho an'ny tetikasanao